> Resource > Video > Sida loo dar Photo si Video
Ku darista sawir in video ah oo kaa caawin kara inaad qabsadaan dareenka aad dhagaystayaasha ay daqiiqad digtoonaan la siinayo image shaashadda. Dhab ahaantii, waa hawl si caddaalad ah u fududahay inta aad isticmaali tafatirka qalab sahlan video sida Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) . Ma aha oo kaliya in aad awood u ku darto sawir si video, laakiin waxay kale oo keentaa saameyn ba'an ku. Hadda raac tilmaan-tallaabo-tallaabo in ay bartaan sida ay ku darto sawir si video.
1 Import labada sawir iyo video files
Ku rakib oo ay maamulaan Video Editor. Guji "Import" iyo ka dibna "Open" xitaa aad video iyo sawir files. Double-guji files oo ay la keeno doonaa barnaamijka. Waxa kale oo aad si toos ah u soo jiidi kartaa jeedi files ee barnaamijka.
2 dar sawir si video iyo codsan saamaynta qaar ka mid ah
Ka dib markii ay soo degida files barnaamijka, jiidi aad video clip in waqtiga barnaamijka ee hoose ee shaashadda. Markaas jiidi oo hoos u sawirka si ay ula socdaan PIP ah. Riix ah "Play" icon inay ku eegaan aad video. Sawirka on track PIP u barta oo aad ka jeclaan lahaa in ay kor u muujiyaan iyo jiidi dhamaadka soo gaabin ama dhererka PIP kordhiyo dhaqaaq.
Markaas sii xaalkaa sawirkaaga sida aad jeceshahay. Si toos ah u saaray sawirka Picture-in-Picture in meel kasta oo aad rabto oo resize daaqadaha ciyaartoyda ay soo jiiday cidhifka sawirka. Ka sokow in, barnaamijkan wuxuu bixiyaa tiro balaadhan oo ah fursadaha customizable si aad u astaysto wadada Picture-in-Picture. Click on Double sawirka ku daray wadada PIP in la furo guddi Mooshin. Halkan waxa aad dooran kartaa in ka badan 30 damacyadii saamaynta in sawirka ku daray dhaceen sameeyo.
Ka dib markii in, riix "Advanced" button u maaskaro dheeraad ah iyo fursado Saamaynta. In tab waji, waana idin Suuraynay karaa sawirka in hal click. Markaasuu u baddashaan "Saamaynta" tab ah taas oo ka kooban qalab badan oo waxtar leh sida xuduudaha, hooskii, isku shaandheyn, flip iyo Alfa. Dooro mid ka mid ah dhibaatooyinka soo aad u doonaya aad si aad video dheeraad ah oo gaar ah.
3 Save file cusub
Ka dib isagoo intaa ku daray in ay sawir video, aad u dhoofin karaan siyaabo kala duwan garaacida badhanka "Abuur". In tab qaabka, waxaad badbaadin kartaa qaabab kala duwan sida. Haddii aad rabto in aad ka ciyaari video abuurka on iPod, iPhone, iPad, guji "Device" iyo dooran liiska qalabka. Waxa kale oo aad si toos ah u gali kartaa adiga video in YouTube ama DVD gubi in cajalladaha u ciyaaro on TV isticmaalaya DVD Player ah.
Sida loo Dallaga Video ah oo la Avidemux